ओली-प्रचण्ड पुगे निर्वाचन आयोग– पार्टी दर्ता हुन केही दिन लाग्ने !
काठमाडौं, ३ जेठ–नयाँ पार्टी दर्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।
दुबै नेता पार्टी विघटन र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित आयोग पुगेका हुन् ।
यसअघि एकीकृत दलको बैठकले सुवास नेम्वाङ र देव गुरुङलाई पार्टी एकताको सवै प्रकृया पुरा नर्गे अधिकार दिएको थियो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता पछि बन्ने नयाँ दल दर्ता हुन अझै केहि दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
आज दल दर्ताको लागि आएको निवेदनमात्र दर्ता हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
पार्टी दर्ताका लागि पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झन्डा, केन्द्रीय सदस्य संख्या लगायतको जानकारी आयोगमा बुझाएपछि प्रकृया शुरु हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले सबै कागजातको अध्यनपछि कानुन र प्रमाणको आधारमा मात्र नयाँ दल दर्ता गर्ने छ ।
दुवै दलले एकता पछि बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने निर्णय गरेका छन् । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो नाममा दर्ता रहेको र कुनै पनि हालतमा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमण : ओलीलाई ‘दाग’ मेटाउने अवसर, राजपा न खुसी न दुःखी !
डी र ई ल्याउनेले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने काठमाडौँ - कक्षा १२ मा एउटा विषयमा डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने पाउने भएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा विषयमा कम्तीमा डी प्लस ल्याउनेले मात्र ग्र...
भारतकाे केरलामा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या तीन सय २४ पुग्यो
त्यो मुलुकी ऐन- राणा शासनकै उल्लेखनीय ठूलाे उपलब्धि
चीनले दिएको नर्सिङ छात्रवृत्ति रोकियो
महाधिवेशन गर्न नेविसंघलाई तीन महिना थप
एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ आजबाट, नेपालसहित ४५ देशका ११ हजार ५ सय खेलाडी सहभागी हुँदै